မှန်ကန်တဲ့ Tense (ကြိယာကာလ) ကို အသုံးပြုနိုင်ဖို့ အကြံပြုချက် ၃ရပ် - Myanmar Network
မှန်ကန်တဲ့ Tense (ကြိယာကာလ) ကို အသုံးပြုနိုင်ဖို့ အကြံပြုချက် ၃ရပ်
Posted by Myanmar Network on June 4, 2012 at 11:34 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Verb ကြိယာ ရဲ့ tense ကာလကို ကြည့်ရင် အဲဒီ ကြိယာက ဖော်ပြတဲ့ လုပ်ရပ် ဘယ်အချိန်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါနဲ့ စာအရေးအသားကို ကောင်းကောင်း နားလည် သဘောပေါက်ဖို့ tense (ကြိယာကာလ) အသီးသီးကို ခွဲခြားသိရမယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ် tense သုံးတယ် ဆိုတာကို သိရမယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ အကြံပြုချက် ၃ ရပ်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်တိုင် ပရုဖ် ဖတ်ဖို့နဲ့ တည်းဖြတ်ဖို့အတွက် tense အသုံးတွေကို လေ့လာသင်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။
၁။ Tense တစ်ခုစီရဲ့ အသုံးအနှုန်းကို သိရမယ်။
Verb ကြိယာ တွေမှာ အခြေခံ tense သုံးခု ရှိတယ်။ simple present simple past ရိုးရိုးအတိတ်နဲ့ simple future ရိုးရိုးအနာဂတ်တို့ ဖြစ်တယ်။ simple present tense အတွက် verb form ကြိယာပုံစံကတော့ verb ရဲ့ အခြေခံ ပုံစံဘဲ ဖြစ်တယ်။ ဥပမာ ‘go,’ ‘eat,’ ‘walk,’ ‘run’ ဆိုတာတွေ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ verb တွေက ပစ္စုပ္ပန် မျက်မှောက်မှာ ဖြစ်ပွားတဲ့ လုပ်ရပ်ကို ဖော်ပြတယ်။ simple past tense ကတော့ အတိတ်ကာလမှာ လုပ်ရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့တာကို ဖော်ပြတယ်။ simple future tense ကတော့ အနာဂတ်မှာ လုပ်မယ့် လုပ်ရပ်ကို ဖော်ပြတယ်။
အခြား tense တွေလည်း ရှိသေးတယ်။ ဥပမာ perfect tense ပြီးစီးမှုပြ၊ the progressive tense ဖြစ်ဆဲပြ၊ perfect progressive tense ဖြစ်ဆဲဖြစ်ခဲ့ပြီးပြ တွေ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ tense တွေကို ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင် အတော် ရှုပ်ထွေးမှု ရှိနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို ဒုတိယဘာသာစကားအဖြစ် သင်ယူသူများ ESL learners အတွက် ကွန်ပျူတာ ဆော့ဖ်ဝဲကို လမ်းညွှန်အဖြစ် အသုံးပြုပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
၂။ Tense အပြောင်းအလဲတွေကို သတိပြုပါ။
၀ါကျ ဒါမှမဟုတ် စာပိုဒ် အတွင်းမှာ tense တွေ ပြောင်းလဲနေတာကို စစ်ဆေးပါ။ ယေဘုယျ စည်းမျဉ်း အနေနဲ့ အသုံးပြုနေတဲ့ verb tense ဟာ ၀ါကျ ဒါမှမဟုတ် စာပိုဒ် တစ်ခုတည်းအတွင်း တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း ဖြစ်ရတယ်။ “We had eaten (past perfect tense) dinner, and then we talked (simple past tense)” - “စားသောက်ပြီးခဲ့ပြီးနောက် စကားပြောခဲ့သည်” လို့ ရေးမယ့်အစား; “We ate (simple past tense) dinner, and then we talked (simple past tense)” – “စားသောက်ခဲ့ပြီးနောက် စကားပြောခဲ့သည်” လို့ ရေးသင့်တယ်။
၃။ Tense တစ်ခုစီအတွက် Verb Form ကြိယာပုံစံတွေကို လေ့လာထားပါ။
Verb ကြိယာ တွေက tense ကာလ မတူရင် စာလုံးပေါင်းလည်း ပြောင်းတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် tense ကာလ တစ်ခုစီအတွက် Verb Form ကြိယာပုံစံတွေကို ပိုင်နိုင်အောင် လေ့လာထားသင့်တယ်။ Simple past tense အတွက် အထွေထွေ စည်းမျဉ်းကတော့ verb အဆုံးမှာ ‘ed’ ထည့်တာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အားလုံးတော့ ‘ed ’ ထည့်လို့ မရဘူး။ future tense တွေ အတွက် verb ရှေ့မှာ ‘will’ ဒါမှမဟုတ် ‘shall’ ထည့်ရမယ်။
Permalink Reply by aung on June 16, 2012 at 15:52
I thank you so much for your sharing knowledge. It is very essential for everyone , I think.
Permalink Reply by aungnaingthu on October 23, 2014 at 11:27
Permalink Reply by Wai Wai Lwin on October 24, 2014 at 14:58
ESL learners အတွက် Tenses တွေကို လေ့လာမယ်ဆိုရင် computer software ကို လမ်းညွှန်အဖြစ် အသုံးပြုလေ့လာနိုင်တယ် ဆိုတာက software name က ဘာလဲဟင်
Permalink Reply by koyemyinttun on June 18, 2015 at 19:29